Ngubani owayengumngenisi we-Hoover Vacuum Cleaners?
Ingathi imele iqikelele ukuba i-Hoover yokucoca i-vacuum cleaner yaqulunqwa ngumntu ogama linguHoover, kodwa ngokumangalisa ukuba akunjalo. Yayiyilungu elibizwa ngokuthi nguJacob Spangler owasungula okokuqala ukucoca umbane wamanzi ngo-1907.
IJanitor Ngenjongo Engcono
U-Spangler wayesebenza njengomlondolozi osebenza kwi-Zollinger Department Store e-Ohio xa kwakufika kuye umbono wokuqala wokucoca umbane wococa umbane.
Umthungo owenziwe ngumsebenzi wayemenza ukhwehlela kakhulu kwaye oku kwakuyingozi kuba iSpangler yayisisifo se-asthmatic. Ngelishwa, wayenayo enye into ekhethiweyo kuba i-"vacuum cleaners" esezingeni elide yayinkulu, imicimbi engabonakaliyo idonselwa ngamahashe kwaye ayinakho ukucoceka ngaphakathi .
U-Spangler wanquma ukuza kunye nenguqu yakhe yokucoca i-vacuum cleaner, enye engayi kuba yingozi kwimpilo yakhe. Wayengekho omtsha ukuvelisa njengoko wayesebenelungelo lokuvuna ingqolowa ngowe-1897 kunye nefom ye-hay93 ngo-1893. Waqala ukukrola ngemoto engumdala, eyayifakela kwibhokisi yeesepha eyayiqhutywe kwisibambo somshanelo. Emva koko waguqula ityala elidala lomcamelo ibe ngumqokeleli othuli kunye noqhotyoshelweyo. Ukuchithwa kwe-Spangler ekugqibeleni kwaba yiplasi yokucoca yokuqala yokusebenzisa umgca wecwecwe yecuphu kunye nokucoceka okunamathiselwe njengoko waphucula umzekelo wakhe oyintloko. Wamkela ilungelo lobunikazi ngo-1908.
I-asthma ye-spangler yayilungile, kodwa i-vacuum yakhe yaphuma kwinto yokuqala. Wayefuna ukwenza oko wayebiza ngokuthi "ukutshatyalaliswa kwakhe" eyedwa waza wenza i-Electric Suction Sweeper Inkampani ukuba kwenzeke ukuba kwenzeke. Ngelishwa, abatyali-mali babenzima ukuza kwaye ukuvelisa kwakumgangatho wokuba uvele ukubonisa ukucoceka kwakhe okutsha kumzala wakhe.
UWilliam Hoover uthatha
Umzala kaSpangler uSusan Hoover wayesatshatile kwintsimi yezoshishino uWilliam Hoover, owayenokukhathazeka ngezinye zeengxaki zakhe zemali ngelo xesha. I-Hoover yenza kwaye ithengisa i-saddles, i-harness kunye nezinye iimveliso zesikhumba ngamahashe, njengoko iimoto zaziqalile ukubeka endaweni yamahhashi. U-Hoover wayebethela ithuba elitsha loshishino xa umfazi wakhe emtshela nge-Spangler yokucoca i-vacuum kwaye wayilungiselela ukubonisa.
U-Hoover wachukunyiswa gqitha ngumcocisi wokucoca ukuba uthengise ngokukhawuleza ishishini lika-Spangler kunye neepententi zakhe. Waba ngumongameli we-Electric Suction Sweeper nkampani waza wabiza kwakhona i-Hoover Inkampani. Imveliso ekuqaleni yayinganiselwe kumyinge we-vacuum ezintandathu ngosuku apho kungekho mntu wayefuna ukuthenga. I-Hoover ayizange idangele kwaye yaqala ukunikela iimvavanyo zamahhala mahhala kwaye yabhalisa ukubethelwa kwabathengisi bezindlu ngendlu abangayifumana emakhaya baze babonise abafazi ngelo xesha ukuba basebenze kakuhle kangakanani. Intengiso yaqala ukuqhuma. Ekugqibeleni, kwakukho ukuphuma kweHoover malunga nendlu yonke yaseMelika.
I-Hoover yenza ukuphucula okuqhubekayo kwi-spangler yokucoca i-vacuum kwiminyaka njengoko kudlalwa ukuba imodeli yasepangler yasekuqaleni yayifana nebhepipe ehlanganiswe kwibhokisi yekhekhe.
U-Spangler wahlala kunye neNkampani yeHoover njenge-superintendent, engazange aphumelele ngokusemthethweni. Umfazi wakhe, unyana kunye nentombi bonke basebenzela inkampani. U-Spangler wasweleka ngoJanuwari ngo-1914, ngobusuku ngaphambi kokuba amiselwe ukuba athathe ikhefu lakhe lokuqala.
Imbali yeZiko leMpahla kunye neBullet Proof Vests
Ukuqeqeshwa kweVolleyball: Ukuhlawula iiPraylls
Isitampu Isitampu okanye Ukuprinta
Imifanekiso yeDick Cheney